Ha na-atụ aro ka a na-emepụta ọdọ mmiri artificial iji mepụta ume | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ha na-atụ aro ka a na-emepụta ọdọ mmiri artificial iji mepụta ike.
Daniel Palomino | | Ike mmiri, Noticias
UK, kpọmkwem Companylọ ọrụ Ike Tidal Lagoon na-eme ka a kemmiri ihe, ọ bụ ezie dubious na uche m, amaghị na-ewu a netwọ mmiri ọdọ mmiri gbara gburugburu agwaetiti UK iji nye ndi bi na ya ume onodu ohuru.
Ihe e kere eke nke ọdọ mmiri ndị a Nke ahụ dị ka echiche siri ike n'akụkụ ụlọ ọrụ a ọ na-adaberekarị n'inwe ike iji ike ikuku na ọdọ mmiri ndị a ga-emepụta mgbe ha nọ n'ọkwa dị iche iche n'etiti oke mmiri, na-eme ka mmiri na-asọgharị.
Ọ bụrụ n’ichetaghị ihe ike a mejupụtara, ị nwere ike lee isiokwu ahụ anya "Ọdịiche dị n'etiti ike ikuku na ebili ike"
Ha choro ka ha yie ndi miller ndi were ike nke mmiri mee ihe otutu oge mgbe ha gabigara site na igwe ihe ha nwere ike igha nkpuru ahihia, nke di na ntughari uche karia igwe eji egwu egwu ha na enweta turbine na ikuku ha na-eji mmiri mmiri na-asọ asọ, ebe ọ bụ na turbine fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe dị ka ikuku ikuku na ọdịiche nke ifufe.
1 Kedu ihe kpatara ị na-akụ nzọ na okike nke ọdọ mmiri artificial?
Kedu ihe kpatara ị na-akụ nzọ na okike nke ọdọ mmiri artificial?
Kama itinye ike ikuku ahọrọla ike mmiri n'ihi oke mmiri, kpọmkwem njupụta nke ikuku bụ okpukpu 832 karịa mmiri mmiri, nke pụtara na a 350 km / h ifufe nwere nnọọ obere kinetic ike karịa a 5 eriri oké osimiri ugbu a.
Knots? Akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịdị ka sistemụ a tụrụ n'oké osimiri, mana ijide n'aka na m ga-agwa gị na eriri dị ka 1,85km / h, yabụ akara 5 ga-abụ 9,26 km / h, yabụ ị ga-ahụ na ọ bụ ihe dị iche. nnukwu ekele maka njupụta nke oke osimiri.
Anyị nwekwara uru na ọdọ mmiri na-enweghị atụ dị obere karịa ikuku ikuku na arụmọrụ ya dị mfe.
O zuru ezu maka turbine ọ bụla ịtụgharị iji mepụta ọkụ eletrik nke ahụ dị ka ihe dị mkpa ma wee nyefee ya na ala site na eriri.
Ike Osimiri Na-ada, ya bụ, ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ atụ aro ịmalite site na nnwale ma nwee ya akpa ọdọ mmiri nke mmadụ mere na Swansea Bay dị na Wales.
Nke a ka ha na-eme atụmatụ inweta eweta gburugburu ezinụlọ 150.000 ihe ọ bụla na-erughị, ka e mesịrị ike ọzọ gaps nke ụdị na-aga ịkpa ákwà na netwọkụ iji tinye n’ime atụmatụ 6 ọdọ mmiri ahụ ndị ọzọ dị na Colwyn Bay, Somerset, Cardiff, West Cumbria, Bridgwater na Newport.
Inwe ike ikpuchi ike ikuku ruru 8% nke mkpa UK.
Ọ bụrụ na ị nwebeghị ike ịmara ịdị ukwuu nke ọrụ a, mee ka echiche nke “lagoon” (otu n’ime ọdọ mmiri ndị a chọrọ) nwee 22 kilomita nke ihe mgbochi mgbochi na oke osimiri nke ihe dịka 90 turbines.
Ndị a hydrogen turbines ga-abụ bidirectional optimizing echichi na ihe karịrị 7 mita na dayameta, ọ dịkarịa ala nke a bụ ihe ụlọ ọrụ chọrọ iji wụnye.
“Ike kacha ike nwere ike ịnwụ n'oge otu afọ site n'oge yiri nke a, mana na-enweghị eriri mmiri, ọ ruru 20% nke ike ikuku. Teknụzụ anyị ji na-enye gị ohere ịbawanye oke a ruo 60%”, Ha na-akọwa site na ụlọ ọrụ.
Mịnịsta ike nke Britain enyelarị ọrụ ahụ ọ bụ ezie na atụmatụ a, ndị na-atụ aro a nwekwara ndị na-emegide ya na-egosi na ụgwọ ọrụ a ga-eme ka ụgwọ ụlọ nke 34 dịkwuo elu karịa euro 120 ma ọ dịkarịa ala afọ 1.200, na-eru ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe dị ka nde euro XNUMX.
Ọ bụrụ na ị kwe ka m kwuo uche m na nke a, nye m nke gị na enweghị ụdị oge a, echeghị m ụgwọ ahụ n'ihi na na njedebe ụbọchị ị na-etinye ego na ume ọhụrụ na nke ga-adigide na n'ikpeazụ (Afọ 120 dị oke) ga-akwụ ụgwọ n'ihi na ị ga-ebelata ọkụ eletrik gị nke ukwuu, mana m na-echegbu onwe m gbasara mmetụta gburugburu ebe obibi nke a ga-eweta.
Site na nke a, m na-ekwu iji wuo ọdọ mmiri 6 ma ọ bụ 7 na-agba agba n'oké osimiri na ihe dịka 22 ihe mgbochi ọ ga - ebibi oke ikuku na ndu na - ebute oke ọgba aghara na ọnwụ nke ihe dị iche iche dị ndụ.
Yabụ ị ga-elebanye anya na ụdị nkọwa ọ bụla ma nyochaa mmetụta a na ndị ọzọ ole na ole, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ ịkụ nzọ na ume ọhụrụ, anyị ga-elekọtakwa ihe anyị nwere ugbu a wee ghara idafu ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Noticias » Ha na-atụ aro ka a na-emepụta ọdọ mmiri artificial iji mepụta ike.
Emilio martin dijo
Anyị nwere okporo ụzọ, ala na ahịhịa nke nwere ike ime otu ihe ahụ nwere ike belata obere ụgwọ akụ na ụba na obibi, dị ka igwe ihe na-egbu mmiri. Na France enweela ebe ike meromotive kemgbe ọtụtụ afọ
Zaghachi Emilio Martin
Il bụ ezigbo Emilio, enwere ihe ị ga - eme nke kariri ime ma o doro anya na enwere mmetụta gburugburu ebe obibi, nke ga - adị.
Na United Kingdom o doro anya na ha chọrọ ịga buru ibu mana ihe ọzọ bụ na ha nwere ike.
Anyị ga-anọ na nche ileba anya n’otú ọrụ ahụ si agbanwe ma ọ bụrụ na arụpụtara ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Daalụ maka ịza ajụjụ na ekele.
Zaghachi Daniel Palomino
Castilla y León ga-enye nkwado na 3 M € arụmọrụ arụmọrụ ike na ndị agbata obi
Ọdịnihu nke ike ikuku